Buy Toshiba i5 3rd gen Laptop. Nvidia 2GB in ရန်ကုန် (335,000 Ks) on ipivi
Toshiba i5 3rd gen Laptop. Nvidia 2GB
Body ပါးပါးအသန့် (၁၅.၆)အကိတ် ဆိုဒ်.. Cpu Core i5 3rd gen. Nvidia graphic 2GB ပါတယ်
#Toshiba ဆိုသည်မှာ သုံးဖူးသူတိုင်းအသိ ..အကြိုက်
#Quality ပိုင်းပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းတဲ့ကောင်
#Body ပါးပါး အကိတ်ဆိုဒ် (၁၅.၆) နော်
#Core i5 3th gen ကိုမှ Nvidia graphic 2GB နဲ့
#AutoCad. Game. Design ဘက်စုံအသုံးချပါကွာ
#ဈေးနူန်း (335,000 ks)
#CPU 👉 Core i5 3rd generation 2.60GHz 4CPu
#Graphic 👉 Nvidia 2GB + Intel HD 2GB နဲ့ပါ
#Total graphic 👉 4GB တဲ့ကွ👍👍
#Battery 👉 3hrs အေးဆေးနော်
အမည်:Toshiba i5 3rd gen Laptop. Nvidia 2GB